Waa’ee ”yaalii fonqolchaa” fi ajjeechaa hanga ammaatti maal beekna? | Kichuu
Waa’ee yaalii fonqolchaa fi ajjeechaa hanga ammaatti raawwatamee maal beekna?
(bbcafaanoromoo)–Wanti guyyaa Sanbataa galgala keessa Magaalaa Baahirdaaritti umamee kan hineegamne ture. Dhukaasni tasa naannoo waajjira Pirezidaantiitti dhagahame.
Magaalattiis naasuu keessa galche. Osoo maal akka umamee hinbaramiiniis dhukaasichi magaalatti eddoowwan biraattis dhagahamu eegale.
Erga sababiin dhukaasichaa ”yaalii fonqolchaa” ta’unsaa motummaa Federaalatiin ibsameen booda, akka kan Magaalaa Baahir Daaritti hammaataa ta’u baattus, Finfinnee naannawa mana jireenyaa Janaraal Sa’ireettis dhagahame ture.
Haleellaan magaaloota lamaanittu umamee yeroon itti raawwate kan walitti dhihaate ta’unsaa ammo dhimmichi hariiroo qabaachuu akka danda’u shakkii umeera.
Sanbataa fi Dilbata maaltu uumamee? Waa’ee ajjeechaa fi yaalii fonqolchiichaa hanga ammaatti maal beekna?
Sanbata Waxabajjii 22, 2019
· Waajira buulchiinsa Naannoo Amaaraatti aanga’oonni naannichaa olaanoon sa’aa booda walgahiif taa’anii turan.
· Gara galgalaa keessa namoonni itti gaafatamtoota nageenya naannichaa keessayi jedhaman bakka walgahichaa dhaquun halleellaa raawwatan.
· Haleellichaanis, Preezidanti naannichaa dabalatee namoota lakkoofsi isaanii hin ibsamiin irraa miidhaan qaqabeera.
· Kanaan wal qabatees, magaalaa Baahir Daar iddoowwan adda addaatti dhukaasni tureera.
· Galgala sa’aatii tokko ta’uuf wayita jedhuuttis Waajjira MM’tti Itti gaafatamaan Pirees Sekreetarii Obbo Nugusu Xilaahun EBC irratti dhiyaachuun, fonqolchi angaa’oota naannichaa irratti raawwatamuf yaalamu himan.
· Miseensonni rayyaa ittisa biyyaas Magaalaa Baahir Daariifi naannoosheetti dhimmicha to’achuuf hirmaachusaanii himame.
· Dhukaasni ture kan dhaabbate ta’ulleen, halkanis darbee darbee dhukaasni dhagahamaa ture.
· Halkan sa’aatii shaniin booda paartiin naannicha bulchu ADP’n gareen Birgaadar Janaraal Asaaminew Tsiggeetiin hogganame yaalii fonqolcha taasisuuf yaalu beeksiise.
· Galgala gara naannoo sa’aatii lamaatti ragaaleen Janaraal Sa’iree irratti yaaliin ajjeechaa akka raawwatamu mullisan, karaa midiyaalee hawaasaatiin bahu eegalan.
· Magaalattii keessattis sagaleen dhukaasaa dhagahamu jiraattonni yoo ibsani, Imbaasiin Ameerikaas hojjettoota isaatiif of eeggannoo akka taasisaniif akeekkachiisa kenne.
· Sensaa fi baha magaalaa Finfinnee akkasumas humnootiin eegumsa nageenya magaalattii kan duriitiin addatti bal’inaan hirmaachuun to’annoo taasisuu eegalan.
·Sochiilee Finfinnee fi naannoo isheetti uummata hirmaachisuun raawatamuuf karoorfamanis haqamuun isaanii bulchiinsa magaalaa Finfinfeetiin ibsame.
· Walakkeessa halkaniitiin booda ammo Ministirri Mummee Dr Abiy uffata loltummaatiin TV’tti dhiyaachuun Naannoo Amaaraatti yaaliin fonqolchaa taasifamuu fi Janaraal Sa’iirerratti miidhaan qaqqabu mirkaneessaniiru.
Dilbata Waxabajjii 23, 2019
· Hojii raawwachiistuun ABUT du’a Janaraal Sa’ire fi Majer Janaraal Gazaa’ii ilaalchisuun gadda itti dhagahame ganama keessa karaa dhaabbata quunnamtii uummataa Nannoo Tigraayiitiin ibsan.
· Mootummaan Naannoo Amaaraas haleellaa raawwatameen prezidaantiin naannichaa fi gorsaan isaanii ajjeeffamu akkasumas aanga’oonni biiro madaa’u dubbate.
· Waajirri MM gama isaatiin haleelaawwan Baahir Daarii fi Finfinneetti raawwatamaniin qondaaltoonni mootummaa olaanoon afur ajjeefamu ifa taasise.
· Ibsa waajira MM’tiin kennameen Janaraalonni lamaanu kan ajjeefaman edguudhaan ta’uufi dhimmichis to’annoo jala olfamu ibsaniiru.
· Obbo Laaqawe Ayaaleew ammo bakka Dr. Ambaachew Makonnin bu’uun yeroof Naannoo Amaaraa akka hogganan himame.
· Anga’oonni naannoolee adda addaas ajjeechaafi yaalii fonqolchichaa balaaleffatan.
Raayyaan Ittisa biyyaa erga Magaalaa Baahir Daariitti bobba’een booda hirmaattota ”yaalii fonqolchaa” keessaa muraasa kanneen lakkofsaan hin himamiin to’annoo jala akka olchee fi kanneen hafanis adamsaa jiraachuu ibse.
Preezidaantiin yeroo naannichaa Obbo Laaqawu Ayaaleewu ibsa TV naanichaarratti kennaniin, itti gafatamaa biiroo nageenyaa naannichaa kan turan Birgaadar Janaraal Asaaminew Tsiggee akka hinto’atamiini fi barbadamaa jiraachu dubbataniiru.
MM halkan keessa ibsa kennaniin yakka kana keessaa kanneen harka qaban hundinu itti gaafatamo akka ta’an himaniiru.
“Haayyaloom haa du’u” jechuun kan kakatan Sa’ire Makonnin eenyuudha?